अनुरागले गरे सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग – Nepali Digital Newspaper
नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. खुमबहादुर खड्काका छोरा अनुराग खड्काले गृहजिल्ला दाङको देउखुरीमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेका छन् ।
अनुरागले तापक्रम नाप्ने थर्मल गन, सेनिटाइजर, पीपीई सेट, सर्जिकल मास्क, एन–९५ मास्क, साबुन, फेससेभर लगायतका सामग्री वितरण गरेको जनाइएको छ ।
युवा नेता खड्काले काठमाडौंबाट करिव १५ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री लिएर देउखुरी आएका हुन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसांसद योगेन्द्र चौधरी, दाङ क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति भेषराज पाण्डे, कांग्रेस नेता जानकीलाल बस्नेत, अनुराग यादव, कर्णबहादुर बुढाथोकी लगायतलाई सँगै राखेर स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेको जनाइएको छ ।